October 2021 – Page 40 – Cele News TV
ခမျြးခမျြး စကားပွောနတော ကိုဘေးနားကကွညျ့ ပွီး အသညျးတှေ ယားနတေဲ့ သမီး ငယျလေး Pilar ရဲ့ဗီဒီယိုလေး
အဆိုတော် ချမ်းချမ်းကတော့ လက်ရှိမှာ ခင်ပွန်း၊ သမီးငယ်လေးနဲ့အတူ အီတလီနိုင်ငံတွင် နေထိုင်လျက် ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲဆိုအရေးယူခံထားရတဲ့အတွက် ပြန်လာလို့ မရသေးတာကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အမြဲစောင့်ကြည့် အားပေးနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် […]
လန်ဒန်ကနေ အမိုက်စားပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် သူဇာဝင့်လွင်
လန်ဒန်ကနေ အမိုက်စားပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် သူဇာဝင့်လွင် The post လန်ဒန်ကနေ အမိုက်စားပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် သူဇာဝင့်လွင် appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
ဒါရိုကျတာ မောငျမြိုးမငျးနဲ့ရနျအောငျ ၊ မို့မို့မွငျ့အောငျ တို့ရဲ့ ကနျြးမာရေး ထောကျပံ့ငှမြေားကို ဦးခဈြစရာဆီ သှားရောကျပေးအပျပေးခဲ့တဲ့ ဝဠေုကြျော
ဝဠေုကြျောကတော့ အခုလို ကာလတှမှော အဆငျမပွကွေတဲ့ ပွညျသူတှေ မြားပွားလှနျးလို့ လိုအပျတဲ့နရောတှကေို သခြော စီစဈပွီး တတျနိုငျသလောကျ အခွခေံ စားသောကျကုနျတှေ ပေးဝလှေူဒါနျးကာ အစှမျးကုနျ ဖေးမကူညီနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သကျကွီး အနုပညာရှငျတှထေဲက သူတှကေိုလညျး လိုအပျတဲ့ ကူညီစောငျ့ရှောကျပေးမှုတှကေိုလညျး စာနာစိတျဖွငျ့ ကိုယျတိုငျကိုယျကြ လိုကျလုပျပေးနတောကိုလညျး […]
တစ်နေ့တခြား ပိုပြီးချောမောလှပလာတဲ့ ညီမလေးသံစဉ်မောင်ရဲ့ အလှတရားကို ဖွဲ့နွဲ့ပြီးတင်စားလိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင်
တစ်နေ့တခြား ပိုပြီးချောမောလှပလာတဲ့ ညီမလေးသံစဉ်မောင်ရဲ့ အလှတရားကို ဖွဲ့နွဲ့ပြီးတင်စားလိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင် The post တစ်နေ့တခြား ပိုပြီးချောမောလှပလာတဲ့ ညီမလေးသံစဉ်မောင်ရဲ့ အလှတရားကို ဖွဲ့နွဲ့ပြီးတင်စားလိုက်တဲ့ ဘေဘီမောင် appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
ပရိသတ်တွေအချစ်တော်ဘေဘီမောင်ကတော့ အမိုက်စားဘောဒီနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ဒါအပြင်ဘေဘီမောင်ရဲ့ညီမလေးကလည်းအစ်မဖြစ်သူနဲ့အပြိုင်လှပကျော့ရှင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဘေဘီမောင်ကသူညီမလေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အခုလိုပြောပြလာပါတယ်။ အသက်လေးနှစ်ကွာတဲ့ ညီမငယ်ငယ်က ကစ်ကစ်လေးနဲ့ကတုံးမလေး ငယ်နာမည်ပါကျဲလေးလို့ချစ်စနိုးခေါ်ကြတယ်ခုများ ထွားလာပြီးလှလာလိုက်တာဆိုတာဒီကအမနဲ့ရွယ်တူလေးကြနေတာပဲချောလာလှလာလိုက်တာဆိုတာလည်းမပြောနဲ့ အသားလေးမဖြူပေမယ့်ကြည်ပြီးဝင်းလာလိုက်တာ bodyဆိုအဆီအပိုအလိုမရှိ အရမ်းမိုက်မျက်နှာလေးကလည်း မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းပချိုင့်လေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းလာလိုက်တာဆိုတာလေ ဒီကမကြီးနာကတော့ကြည့်ကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်ကျေနပ်​ညီမချောချောလေးရှိတော့ ဒီကအမကတော့ဂုဏ်ဆာမတင်ကြည်ဖြစ်ရတာပေါ့ချစ်တယ် တျဲလေးဆိုပြီးမျှဝေလာတာဖြစ်ပါတယ်။ Credit ပရိသတျတှအေခဈြတျောဘဘေီမောငျကတော့ အမိုကျစားဘောဒီနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့သူတဈယောကျပါ။ဒါအပွငျဘဘေီမောငျရဲ့ညီမလေးကလညျးအဈမဖွဈသူနဲ့အပွိုငျလှပကြော့ရှငျးတဲ့သူတဈယောကျပါ။ဒါကွောငျ့မလို့ဘဘေီမောငျကသူညီမလေးနဲ့ပတျသတျပွီး အခုလိုပွောပွလာပါတယျ။ အသကျလေးနှဈကှာတဲ့ ညီမငယျငယျက […]
ဆရာ တျော ဘုရားထံ မှာ မှနျမွတျ သော အလှူ အတနျးမြားစှာကို ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ခနျ့စညျသူ
သရုပျဆောငျ ခနျ့စညျသူကတော့ ဗီဒီယိုဇာတျကားတှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျရငျး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို သိမျးပိုကျ ရရှိထားသူ တဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အလှူအတနျးနဲ့ ပတျသကျလာရငျလညျး လကျမနှေးတတျတာကွောငျ့ လိုအပျတဲ့ နရောတှမှော အမွဲလှူဒါနျးနတောကိုလညျး ကွညျနူးဖှယျ မွငျတှကွေ့ရမှာပါ။ အလုပျအကိုငျတှေ ရပျနားထားရလို့ စားဝတျနရေး အဆငျမပွေ ကွတဲ့ ပွညျသူတှေ အတှကျလညျး […]
ကြည့်ရှု့သန်းချီသွားတဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ အရာတွေ ကို အလွယ်တကူ လုပ်ပြ သွားတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
တောထဲမှာ အလွန်ထူးဆန်းလွန်းသော အကောင်တစ်ကောင်မြင်တွေ့ခဲ့တာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ မြနှင်းရည်လွင် The post တောထဲမှာ အလွန်ထူးဆန်းလွန်းသော အကောင်တစ်ကောင်မြင်တွေ့ခဲ့တာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ မြနှင်းရည်လွင် appeared first on Celebrity Corner. klcelenews တောထဲမှာ အလွန်ထူးဆန်းလွန်းသော အကောင်တစ်ကောင်မြင်တွေ့ခဲ့တာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ […]
တောထဲမှာ အလွန်ထူးဆန်းလွန်းသော အကောင်တစ်ကောင်မြင်တွေ့ခဲ့တာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်
တောထဲမှာ အလွန်ထူးဆန်းလွန်းသော အကောင်တစ်ကောင်မြင်တွေ့ခဲ့တာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ မြနှင်းရည်လွင် The post တောထဲမှာ အလွန်ထူးဆန်းလွန်းသော အကောင်တစ်ကောင်မြင်တွေ့ခဲ့တာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ မြနှင်းရည်လွင် appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
မြန်မာသွေးတဝက်တိတိပါတဲ့ ကပြားမလေးလို့ လုံးဝမထင်ရတဲ့ မော်ဒယ် YOLANDA THEIN
မြန်မာသွေးတဝက်တိတိပါတဲ့ ကပြားမလေးဆိုတာလုံးဝမထင်ရတဲ့ International Model Yolanda Thein ရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးများ ဗမာလူမျိုးတွေဟာ ဟိုးအရင်ခေတ်တည်းက တမူထူးခြားပြီး ယဉ်တဲ့အလှကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ စိတ်ဝင်စားခြင်းကို အထူးတလည်ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ယခုအခါမှာလည်း မြန်မာကပြားမလေးဖြစ်ပြီး International model အဖြစ်ရပ်တည်နေခဲ့တဲ့ Model Yolanda Thein ရဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြောပြပေးပါမယ်နော်။ […]
ချစ်စရာစတိုင်လ်လေးနဲ့ ပရိသတ်ကြီးရဲ့အချစ်တွေကို ပြန်လည်ရယူဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
ချစ်စရာစတိုင်လ်လေးနဲ့ ပရိသတ်ကြီးရဲ့အချစ်တွေကို ပြန်လည်ရယူဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး The post ချစ်စရာစတိုင်လ်လေးနဲ့ ပရိသတ်ကြီးရဲ့အချစ်တွေကို ပြန်လည်ရယူဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး appeared first on Celebrity Corner. klcelenews